Nezvedu - Wenzhou Starttinal toy Co., Ltd.
Yakatangwa muna 2000, Wenzhou Starttinal toy Co., Ltd. iri muYang Wan Industrial Zone, Yongjia, Wenzhou, Zhejiang.China.Tine vashandi makumi mashanu nevashanu, vanofukidza nzvimbo ye2000 square metres.Tine hunyanzvi mukugadzira mhando dzakasiyana dzemidziyo yevana yemukati neyekunze yekudzidzira chikoro chepamusoro nemitengo iri pakati nepakati.
Zvese zvinotengeswa zvine anopfuura 3years echiitiko chekutumira kunze, anoziva mutemo wekutumira kunze kwenyika uye maitiro ekunze ekunze, anokubatsira kuita tsika yemvumo uye maitiro ekunze zvakanaka.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvinosanganisira vana 'sensory yekubatanidza matoyi ekudzidzisa, midziyo yekuvaraidza yakaita seyevana dombo dombo, epurasitiki block set, bhanhire, mota hunyanzvi set.Tine watinoshanda naye mubhizinesi pasi rose, zvikuru muNorth America, South America, nyika dzeEurope pamwe nenyika dzeMiddle East.
Chigadzirwa chedu chakagadzirwa nepurasitiki-yekudzivirira nharaunda, yatopasa CE uye ASTM test certification, zvakare inogona kupasa mamwe bvunzo aunoda.Zvese zvekushandisa zvakaedzwa.Tinogona kuita OEM uye ODM kugutsa vatengi vedu 'zvakasiyana zvinodiwa.
Sezvo kambani yedu yakavambwa, tanga tichiomerera kukutenda kwedu kuti "mhando, sevhisi, uye hunyanzvi zvinouya kune yedu pekutanga".1. Runyoro rwekotesheni ruchapihwa nekukurumidza sezvinobvira kana wawana kubvunza kwako.
2.Muchigadzirwa chekugadzirwa kwechigadzirwa kune vaongorori vemhando yehunyanzvi kuti vatarise zvisina tsarukano kuti ive nechokwadi chemhando yechigadzirwa chedu.
3.Kupa zvigadzirwa zvitsva mwedzi wega wega kuti vatengi vasarudze kubva.
Kuburikidza neaya makore makumi maviri ese, zviito zvedu zvakaenderana neshoko redu uye tichaita mumakore anotevera zvakare ndosaka tichigamuchirwa nevatengi vedu, vatinoshanda navo, uye kunyange vakwikwidzi kumba nekune dzimwe nyika.Kuedza kwedu kunobhadhara uye isu tichaenderera mberi nekuita basa rakanaka rekuita iri nani Kutanga.
Tinogamuchira makambani ese anoda sevhisi yedu uye chigadzirwa kuvaka hukama hwebhizinesi nesu.
Zhejiang STARTINAL Toys Co., Ltd. yakavambwa muna 2000, iri muYangwan Industrial Zone, Qiaoxia Town, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China.
Isu tiri bhizinesi rinonyanya kusimudzira, kugadzira uye kutengesa zvemukati nekunze zvevana zvevaraidzo.Isu ndisu fekitori sosi, tinogadzira zvinopfuura mazana matatu emhando yepamusoro zvigadzirwa.
Tine vatengi vanopfuura 100,000 vakaumbwa nezvikoro, makirabhu emitambo, mabhizinesi, nzvimbo dzekusimbisa muviri, masangano ehurumende nezviuru zvevanhu vemazuva ese vanoda kushandisa STARTINNAL kumba, pakupera kwesvondo kana neshamwari nemhuri.Isu tinotumirawo zvigadzirwa zvedu kunze kwenyika kune dzinopfuura 40 nyika!
PaZHEJIANG STARTINAL TOY CO., LTD, tinotenda mukugadzira tsika yechikwata inosanganisa tsika dzedu dzepakati.Isu tine hutsika hwekushanda hwakasimba uye tinoedza kugara tichivandudza hunyanzvi hwedu.Kana tatarisana nedambudziko, tinogara tichigadzira uye kutsvaga nzira dziri nani dzekukunda zvipingaidzo.Chikwata chedu chinogara chichikubata neruremekedzo, chiremerera uye nerukudzo.Tinogashira uye tinombundikira kusiyana uye tinoshanda pamwechete sechikwata chakabatana kuti tipe nzvimbo yebasa yakachengeteka, inobudirira uye yakasununguka.Pakati pezvatinoita, tinoita sarudzo dzedu dzese kubva kune vatengi maonero sezvo isu tichitenda basa revatengi ndizvo zvese!
Kero: Yangwan Industrial zone, Qiaoxia Town, Yongjia County, Wenzhou, Zhejiang, China.
© Copyright 20192021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.